कृषि पढेर कृषिमै रमाउँदै शिशिर - Pradesh Today कृषि पढेर कृषिमै रमाउँदै शिशिर - Pradesh Today
शिशिर रावत पछिल्लो समय कृषि व्यवसायमा व्यस्त छन् । उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ बखरियामा दश कट्ठा जग्गामा व्यवसायीक कृषि खेती गर्दै आएका छन् ।
कृषिको व्यवसायीकरण गर्नका लागि कृषि विषय पढेका रावतले पछिल्लो समय विभिन्न जातका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । यसका साथै स्थानीयहरूलाई व्यवसायीक कृषि खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापन र त्यसबारे परामार्शसमेत दिदै आएका छन् ।
स्वदेशमै श्रम गर्नसके विदेश जानु पर्दैन भन्ने सन्देश रावतले दिएका छन् । नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि कृषिको महत्वका बारेमा बुझ्न र बुझाउन नसकिएको रावतले बताए । पढे लेखेका युवा पुस्ताले माटो छुनु हुँदैन ?
भन्ने मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नका लागि आफूले यो पेशा सुरू गरेको उनको भनाई छ । पूर्खाले कृषि गर्दै आएपनि नयाँ पुस्ताले माटो छुनु हुँदैन, माटोमा काम गर्नुहुँदैन ? भन्ने मानसिकता छ’ उनले भने– ‘युवालाई कृषिमै आकर्षित गर्नका लागि मैले यो कृषि व्यवसाय सुरू गरेको हुँ ।
आफूले सिकेको सीपलाई सदुपयोग गर्दै रावतले टनेलको प्रयोग गरी तरकारीहरू उत्पादन गर्दै आएका छन् । बारीमा यतिबेला टमाटर, करेला काक्रालगायतका तरकारीहरू लटरसम्म फलेका छन् । प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेमा कृषिमा राम्रो भविष्य रहेको उनले बताए ।
टनेल, थोपा सिंचाई र मल्चिङको प्रयोग गरी उनले तरकारीहरू उत्पादन गर्दै आएका छन् । परिवारले विगत १८ वर्षदेखि कृषि पेशा गर्दै आएको भएपनि उक्त खेतीलाई सात वर्षदेखि व्यसायीक बनाएको उनले बताए । रूपमा तरकारी उत्पादन गर्दै आएको उनले बताए ।
माटो छोएर सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले विगत दुई वर्षदेखि कृषिलाई आधुनिकीरण गर्दै तरकारी उत्पादन, बजार प्रवद्र्धन र स्थानीयस्तरमा रोजगारसमेत दिदै आएका छन् । कृषिबाटै आर्थिक समृद्ध सम्भव भएको उनी बताउँछन् ।
मेहनत गरे आफ्नै देशमा मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उनले दिएका छन् । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि आफूले कृषिलाई मुख्य पेशाको रूपमा अगाडि बढाएको बताउँछन् ।
तरकारी उत्पादनका लागि बखरिया क्षेत्र एकदमै उपयुक्त भएपनि स्थानीयले चासो नदिएको उनको भनाई छ । बाहिरबाट आएर तरकारी व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू प्रशस्त छन्’ उनले भने–
‘तर यहाँका स्थानीयहरूलाई कुनै मतलब नै छैन ।’ तरकारीको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको बखरियाको महत्व बुझाउन र स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनका लागि आफूले उक्त ठाउँमा तरकारी खेती सुरू गरेको उनी बताउँछन् ।
तरकारी खेतीबाट स्थानीयले समेत लाभ लिएका छन् । तरकारी लगाउने, गोडमेल गर्ने र टिप्ने समयमा सात÷आठजनाले रोजगार पाउने गरेको उनले जानकारी दिए । अहिले दैनिक दुईजनाले रोजगार पाउने गरेका छन् । उनका अनुसार तरकारीबाट एक सिजनमा करिब तीन लाख बराबरको कारोवार हुने गर्दछ भने वार्षिक नौ लाख बराबरको कारोवार हुने गर्दछ ।
त्यतिमात्र नभई रावतले स्थानीयस्तरमा तरकारी व्यवसाय गर्न चाहने ईच्छुक व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परामर्श, सल्लाह र सुझाव दिनुका साथै आवश्यक कृषि सामग्री समेत उपलव्ध गराउँदै आएका छन् ।
उत्पादित तरकारीहरू तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा खपत बिक्री वितरण हुनुका साथै आवश्यक परेको समयमा जिल्ला बाहिरबाट समेत खरिद गर्न आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी उनले किसानहरूलाई सहुलियतमा कृषि सामग्री उपलव्ध गराउने उद्देश्यले गुणस्तर कृषि सोलुसन प्रालि सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए । यस संस्थामार्फत बीउबिजन बाहेक थोपा सिंचाई, नेट हाउस, मल्चिङलगायतका सम्पूर्ण कृषि साम्रगीहरू उपलब्ध गराइने बताए ।
तर सरकारले किसानका बारीमा उत्पादित तरकारीको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानहरू मारमा परेको उनको गुनासो छ । व्यापारीको मनोमानी मूल्यका कारण वास्तविक किसानहरूले मूल्य नपाएको उनले बताए । यसका लागि सरकारी आवश्यक नीति ल्याउनुका साथै कृषि व्यवसाय गर्ने कृषकहरूका लागि कृषि अनुदान फराकिलो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
लापरबाहीले कोरोना घट्दैन